Dawlada Maraykanka oo goordhaw soo saartay War saxaafadeed ay si adag uga dalbatay madaxda Soomaalida inay xal dag dag ah ka gaaraan arimaha doorashada | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dawlada Maraykanka oo goordhaw soo saartay War saxaafadeed ay si adag uga...
Dawlada Maraykanka oo goordhaw soo saartay War saxaafadeed ay si adag uga dalbatay madaxda Soomaalida inay xal dag dag ah ka gaaraan arimaha doorashada
Dawlada Maraykanka ayaa goordhaw soo saartay War saxaafadeed ay si adag uga dalbatay madaxda soomaalida inay xal dag dag ah ka gaaraan arimaha doorashada.
Halkan ka aqriso qoraalka oo ah ingiriisi iyo Somali.
Mareykanku wuxuu ku boorrinayaa Madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka qaran ee Soomaaliya inay hadda wax ka qabtaan xallinta jahwareerka siyaasadeed ee halista ku ah mustaqbalka Soomaaliya iyo inay heshiis wada gaaraan hoggaamiyeyaasha Dowlad Goboleedyada Xubnaha ka ah Federaalka, si loogu oggolaado in si deg deg ah loo qabto doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxweynaha.
Dhibaatada siyaasadeed ee sanadkii la soo dhaafay waxay dhalisay natiijo la’aan niyad jab leh oo la xiriirta la-dagaallanka al-Shabaab iyo hagaajinta amniga, horumarinta horumarka dhaqaalaha ka dib markii la gaadhay marxaladda koowaad ee ka cafinta deynta, iyo in si wax ku ool ah wax looga qabto cunno yarida iyo aafooyinka dabiiciga ah ee halista ugu badan leh. dadka Soomaaliyeed.
Si dhakhso leh u xallinta caqabadaha taagan ee doorashada ayaa muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya.
Waana masuuliyada iyo waajibka saaran madaxda qaranka iyo kuwa gobolada, inay meel iska dhigaan raadinta danaha siyaasadeed ayna taa badalkeeda ku shaqeeyaan danaha shacabka Soomaaliyeed oo iyagu mudan kan ugu fiican madaxdooda.
Hadda waxaa la joogaa xilligii la xallin lahaa arrimaha taagan oo la dhammayn lahaa shaqada qabashada doorashooyinka.
Previous articleKulankii Baarlamaanka oo maanta lagu soo dhax dusiyey Ciidamada dharcadka oo Bistoolada ku hubeysan
Next articleDowladda Mareykanka oo ugu baaqday madaxweyne Farmaajo iyo hoggaanka qaranka Soomaaliya inay deg deg u xaliyaan is-mari waaga
Dowladda New Zealand ayaa ku dhowaaqday in wixii ka dambeeya maanta oo Talaado ah aysan karantiiliz doonin dadka uga imaanaya gobolka Victoria ee dalka...
Wasiir ku xigeenka Haweenka Puntland oo uga digtay Culimaa’udiinka...